Iflethi okanye indlu ekwi-complex (icondo) yonke sinombuki zindwendwe onguLaurent
Indawo ezolileyo kakhulu. Isandi samaza siya kukuphumza. Ifumaneka kude neSaint-Pierre, isixeko sobugcisa kunye nembali. Ulwandle alukho kude kakhulu kwaye lucocekile ngamaxesha onke. Ukwahluka kwezitya ezibonelelwa ziivenkile zokutyela kuya kukuvuyisa. Kubathandi bezemidlalo, unokufikelela ngokulula kwiindlela ezithile zokuhamba intaba ezikufutshane.
Ithuba lokuodola isidlo sakusasa
4.87 · Izimvo eziyi-246
Ifakwe kwindawo ezolileyo kakhulu yeCarbet. Indawo yakho yexesha elizayo yokuphumla iphakathi kolwandle namaphandle. Ndiyinzalelwane yokwenyani. Ndingakubonisa iindawo. Okanye ungaphumla okanye uhambe intaba. Konke oku kukhuseleko olupheleleyo, kunjalo.
Ukuba unqwenela, ndiyakwazi ukukunika lonke ulwazi malunga neMartinique, imbali yayo kunye neendawo zayo ezibalulekileyo. Ndiyafumaneka ngoku kwaye unganditsalela ngokulula kwi-0696434427, okanye, elmedaco@gmail.com. Sukoyika.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Le Carbet